Cuntoo yinka maa lintii ee dugsiga xanaa nada iyo dugsiga – Bildung und Teilhabe
Sharaxaada cuntooyinka maalinta
Kani waxaa ku jira qaabilaada qarashaadka cuntooyinka maalinta laga wadaago dugsiga xanaanada iyo dugsiga.
Carruurta dugsiga xanaanada
Yaa ka qeybgalo dugsiga guud iyo shaqada,
Yaanan helin wax lacag bixin tababarka ah,
Yaa ka yar 25 sanno jir,
Heshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
Canugaaga ma jeclaanayaa in uu ka qeybqaato cuntooyinka wadajirka maalintii ee dugsiga xanaanada (Kiga) ama baaxada dhexdeeda ee masuuliyada dugsiga? Kadib gudbi codsi. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Mittagessen in Kiga/Schule (Cuntooyinka maalinta ee dugsiga xanaanada/dugsiga) : : foomka “Komm – Mach mit” jeega-buuga, iyo, buuxi bogga hore ee codsiga. Haysto dhinac gadaal ah ee uu buuxiyay bixiyaha (tusaale ahaan: dugsiga xanaanada, ururka taageerada (Förderverein), cunto bixinta). U soo gudbi foomka oo dhameystiran Pro Arbeit.
Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga oo si toos ah ugu wareejinayo lacagta akoonka la sheegay ee qofka masuulka ka ah (tusaale
ahaan. Stadtkasse – qasnada caasimada) haddii la ansixiyo. Intaa waxaa dheer, waa in aad bixisaa tabaruca ugu yar shaqsiga oo
ah EURO 1 cuntadiiba.